Wararka Maanta: Arbaco, Apr 25, 2018-Xulka Qaranka Soomaaliya oo u soo baxay Finalka tartanka Cecafa cayaartooyda da’doodu ka yar tahay 17-da sano
Arbaco, April, 25, 2018 (HOL )- Xulka Kubadda Cagta Soomaaliya ku matalaya tartanka Cecafa ee cayaartooyda da’doodu ka yar tahay 17 sano ayaa ugu danbeyntii xaqiiqsaday in ay u soo baxeen Finalka tartanka kaddib markii ay 1-0 uga adkaadeen xulka Qaranka Uganda.
Qeybtii hore ee cayaarta waxaa Rigoore loo dhigay aan ka faa’ideysan xulka kubadda Cagta Uganda, tasoo ka dhigtay in wareegga hore lagu kala nasto 0-0.
Hasse ahaatee wareegii danbe ee cayaarta markii leysku soo laabtay ayeey xulka kubadda Cagta Soomaaliya Goolkoodii ugu horeeyay helleen kaasoo uu u dhaliyay Farxaan Duqoow, waxaana uu Goolkasi noqday mid u horseeda cayaartooyda Soomaaliya in ay u soo gudbnaa Lugta ugu danbeysa tartanka.
Horay waxaa ay uga soo badiyeen xulka Kenya 1-0 waxaana muuqata in dhalinyarada da’doodu ka yar tahay 17 sano soo bandhigayaan cayaar xirfad sare leh tartanka oo ka soconaya dalka Burundi.
Hiiraan Online Nairobi Kenya
4/25/2018 3:40 AM EST
Arbaco, April, 25, 2018 (HOL)–Dowladda Koofur Africa ayaa ku wareejisay dowladda Soomaaliyeed deeq lacageed oo gaareysa 500,000$, kadib munaasabad kooban oo ka dhacday Magaalada Muqdisho.